Aasaase xisbi xag jir ah oo ku howl-gala macallin dugsi sare - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Ardey fasal ku jirta. sawir: Roald, Berit
Aasaase xisbi xag jir ah oo ku howl-gala macallin dugsi sare
La daabacay måndag 11 december 2017 kl 11.39
Ma ahaan karaa xag jir (vit-makt-rörelse) iyada oo dhanka kale lagu shaqeeyo macallin dugsiga sare wax ka dhiga? Mid ka mid ah aasaaseyaashii ururka xag-jirka garabka midig ee awoodda caddaanka waddammada dhaca waqooyiga Yurub - vit makt-rörelsen Nordisk Alternativhöger ayaa kaga howl-galo macallin wax ka dhiga maaddada xisaabta mid ka mid ah dugsiyada sare ee dhaca magaalooyinka bartamaha Sweden.
Ninka la hadal hayo oo da’diisu soddomeeyo kor u dhaaftay ayaa ku sheegay barnaamij ereyo necayb ku ah dadka dadyoowga isku jinsiga ah ee isu galmooda iyo liidista haweenka oo aan ka tarjumeeyn xuquuqda sinnaanta bani’aadamka.
Qof aan dhammeeyn waxaa astaamaha lagu summadeeyo dadyoowga isku jinsiga ah ee isu galmooda.
Xaqiiqdii waa ereyo caqli gal ah: ”Waa inaannu ilaalinaa jiritaanka bulshadeenna iyo mustaqbalka dhallaanka cadcad."
Haweenku waxey u sameeysan yihiin qaab aan u saamaxeeyn inay qaataan go’aanno waawayn ee siyaasadeed.
Ereyadaa ayaa ka mid ahaa barnaamij uu sii daayay ururka xag-jirka garabka midig ee awoodda caddaanka waddammada dhaca waqooyiga Yurub - vit makt-rörelsen Nordisk Alternativhöger oo uu ninkani qayb ka ahaa.
"Miyaanay saameeyn ku yeelanayn macallin-nimada"
Ninkan macallinka ah ayaa ku sheegay inuu ururka u hayo howsha tifatiraha shaashadda internetka, halkaasina oo naceeybka yuhuudda loo qabo iyo faqooqa lagu barxo waddaniyadda. Hase yeeshee aanay ula muuqan in howsha uu ka hayo ururka xag-jirka ay saameeyn ku yeelato howshiisa macallin-nimo.
–May, saameeyn kuma yeelato. Waxaan u arkaa in la ii shaqaaleeyey sidii aan howl u fulin lahaa, waxaan ula jeedaa inaan xisaab dhigo. Waxaan howshaa uga soo dhalaalo sidii loogu talo galay sida ay ila tahay.
Kiis kale oo baaris lagu hayo
Ma ahan wax xeerka ku xaddidan howlaha uu macallin ka qayb qaadan karo iyo kuwa aanu ka qayb qaadan karin. Iyadoona ay hayadda kor-meerka iskuulladu ay iminka baaris ku hayso macallin ka howl-gala nawaaxiga Skåne oo qayb ka ahaa bannaan-bax uu ka dambeeyay ururka xag-jirka ee magaciisa loo soo gaabiyo NMR. Iyadoona la filayo inuu go’aanka baaristaa laga gaaro uu noqdo dhabba-tus. Hase yeeshee waa mid aan la hubin.
Laanta wararka ee P3 oo telefoon kula xiriirtay maamulaha dugsiga uu ninkaasi baraha ka yahay ayaa sheegay in aanay fikirradiisu ka muuqan xiisadihiisa, balse uu iskuulku iminka baaris ku tallaabsaday.
Wa xaalad aan la hubin xeer ahaan
Guddiga masuuliyadda macallimiinta ayaa digniin siin kara ama shatiga macallin-nimo kala noqon kara macallinka howlihiisa u gudan waaya si xilkas-nimo ku dheehan tahay. Hase yeeshee aanay horay u soo marin fal midkan oo kale ah. Waana mid ay guddiga ku adag tahay inuu ka faalloodo.
–Midda loo baahan yahey in aannu qiimeeyno waa falalka cad cad oo loo qiimeeyo in aannu macallinku ku habboonayn howlaha uu iskuulka ka qabto. Waana falal ey tahay iney si joogto ah uga dhacaan iskuulka, sida uu sheegay guddoomiyaha guddigu Lars Dirke.
David Lifmark, ahna baare isla-markaana xubin ka ah guddiga anshaxa ee macallimiinta oo uu ka dambeeyo ururka macallimmiinta. Wuxuu sheegay inay tahay xaalad aan suurtagal ahayn in la mideeyo xaaladda qiimeeyn iskuulka iyo in laga mid ahaado urur xag-jir ee noocaasi ah.
–Xirfadda macallin-nimo ayaa ku dhisan is aamin. Haddii uu shakhsi xag-jir ah uu macallin ku howl-galana waa dhibaato. Waa haddii aan si dabac-sanaan ah aan u hadlo.
Cunsuri ma ku howlgeli karaa macallin-nimo.